Ny Basy Volamenan’ny Parlemanta Rosiana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Desambra 2013 1:20 GMT
Indray andro dia nilaza ilay mpitondra teny fahiny tao amin'ny Parlemantan'i Rosia, Boris Gryzlov [ru] fa tsy toerana “hanaingàna ady politika” akory ny Duma. Mijery an'ireo saintsarin'antoko politika sy saribakoly izay nibodo ny fanaovan-dalàna tao Rosia tato anatin'ny folo taona farany, teboka iray no notsoahan'i Gryzlov. Ao Kremlin sy ireo ministera federaly no tena atao ny ady politika ao Rosia, toerana ahitàna ireo karazan'ankolafy sy fitsitokotokoana samihafa mifaninana hifehy sy hametraka ny dindony amin'ireo mpitantana ny governemanta. Kanefa io tsy entina hilazàna fa hoe tsy misy mihitsy ny fifandirana ao amin'ny Duma. Ohatra ny Talata lasa teo, 3 Desambra 2013, noporofoin'ny solombavambahoaka roa fa mbola manana ady sasantsasany tavela ao anatiny ao ny Duma Rosiana, rehefa tonga hatrany amin'ny fifamelezana totohondry tao an-dalantsaran'ny parlemanta izy ireo.
Tsy mbola mazava ny anton'ny fifampikasihan-tànana, satria samy manana ny tantara lazainy ny roa tonta mpifanandrina. Ny solombavambahoaka Alexey Zhuravlyov nilaza fa nipoaka ny ady rehefa injay ilay mpiray asa aminy, Adam Delimkhanov, nametraka ho teo anoloany ny raharahan'ilay tsangambato iray vaovao fanomezam-boninahitra vehivavy Chechen iray maty novonoin'ny andian-tafika imperialy Rosiana tamin'ny taonjato faha-19 [jereo ny lahatsoratry ny Global Voices tany aloha]. (Nitaraina mikasika io tetikasa io i Zhuravlyov, nitaky [ru] tamin'ny Lehiben'ny Fampanoavana Rosiana mba hanadihady ilay mpitarika ny Chechen, Ramzan Kadyrov, noho ny fitarihana fitakiana fisarantsarahana.) Delimkhanov no nanainga ny totohondriny voalohany, araka ny filazan'ilay ramatoa mpitondra tenin'i Zhuravlyov. Tsy niato ny fifamelezana raha tsy injay nilatsaka avy any anaty akanjon'i Delimkhanov tany ny basy poleta milokom-bolamena. Samy tsy misy te-haneho hevitra mikasika ny fiampangan'i Zhuravlyov, na i Delimkhanov na ny biraony.
Nakarin'i Alexey Navalny tao amin'ny bilaoginy ilay tantara, ary nanamarika izy hoe [ru] :
i Valery Amirov, bilaogera, nilaza [ru] fa nokendren'i Delimkhanov mihitsy mba tsy ho any amin'ny toerana misy kamerà mihodina tsy miato no hitrangan'ilay fifanatrehana.
Iray amin'ireo mpamaky an'i Amirov no naneho hevitra toy izao :
Alfred Koch nivazivazy hoe :
Mandritra izany, i Kirill Shulika (LJ's Viking_Nord) nahita ilay tranga ho toy ny ohatra hafa fotsiny ihany amin'ireo “fanomezan-dàlana malalaky” ny Kremlin ho an'ny olon'i Kadyrov :